Akwụkwọ Ozi Nke Abụọ E Degaara Timoti 2:1-26
Kụziere ndị ruru eru ihe m kụziri (1-7)
Idi ahụhụ n’ihi ozi ọma (8-13)
Na-akụzi okwu Chineke, na-akọwakwa ya nke ọma (14-19)
Gbaara ihe na-agụ ndị na-eto eto ọsọ (20-22)
Otú e kwesịrị isi emeso ndị isi ike (23-26)
2 Nwa m,+ ka amara Chineke na-emere ndị na-eso ụzọ Kraịst Jizọs mee ka ị na-enweta ike. 2 Ihe ị nụrụ n’ọnụ m, nke ọtụtụ ndị gbakwara akaebe ya,+ kụziere ya ndị a tụkwasịrị obi, ndị ga-erukwa eru nke ọma ịkụziri ya ndị ọzọ. 3 Na-edi ahụhụ a na-ata gị+ n’ihi na ị bụ ezigbo onye agha+ Kraịst Jizọs. 4 Onye agha anaghị etinye aka n’ọrụ ọzọ e ji akpa ego,* n’ihi na ọ chọrọ ime ihe ga-amasị onye debara aha ya ka ọ bụrụ onye agha. 5 Ọ bụrụkwa n’egwuregwu asọmpi, a naghị enye onye so na ya ihe nrite* ma ọ bụrụ na o rubeghị isi n’iwu na-achị asọmpi ahụ.+ 6 Onye ọrụ ubi nke na-arụsi ọrụ ike kwesịrị ịbụ onye mbụ ga-eri mkpụrụ ọ kụrụ. 7 Na-echebara ihe m na-ekwu echiche mgbe niile. Onyenwe anyị ga-eme ka ị ghọta ihe niile. 8 Cheta na a kpọlitere Jizọs Kraịst n’ọnwụ+ nakwa na ọ bụ nwa Devid.*+ Ozi ọma a ka m na-ezisa.+ 9 Ọ bụ n’ihi ya ka m ji na-ata ahụhụ. Ọ bụkwa ya mere e ji tụọ m mkpọrọ dị ka à ga-asị na m bụ onye omekome.+ Ma, e keghị okwu Chineke agbụ.+ 10 Ọ bụ ihe a mere m ji na-atachi obi n’ihe niile maka ndị Chineke họọrọ,+ ka e wee si n’aka Kraịst Jizọs zọpụtakwa hanwa, ha adịrịkwa ebube ruo mgbe ebighị ebi. 11 E kwesịrị ịtụkwasị okwu a obi: N’eziokwu, ọ bụrụ na anyị na ya nwụkọrọ ọnwụ, anyị na ya ga-adịkọkwa ndụ.+ 12 Ọ bụrụ na anyị ana-atachi obi, anyị na ya ga-abụ eze, na-achịkwa achị.+ Ọ bụrụ na anyị agọnahụ ya, ọ ga-agọnahụkwa anyị.+ 13 Ọ bụrụgodị na anyị emeghị ihe Chineke kwuru, yanwa ga na-eme ihe o kwuru mgbe niile, n’ihi na o nweghị ike ịgọnahụ onwe ya. 14 Na-echetara ha ihe ndị a, na-agwasi ha ike n’ihu Chineke ka ha ghara iji maka ihe mmadụ kwuru na-ese okwu. Ime otú ahụ abaghị uru ọ bụla n’ihi na ọ na-akpa okwukwe ndị nụrụ ya aka ọjọọ. 15 Gbalịsie ike ka ihe gị dị Chineke mma, ka ị bụrụkwa onye ọrụ nke ihe ọ rụrụ na-anaghị eme ihere, onye na-akụzi eziokwu, na-akọwakwa ya nke ọma.+ 16 Egekwala okwu na-enweghị isi ndị e ji ekwulu Chineke,+ n’ihi na ha ga na-emekwu ka ndị mmadụ ghara ịna-akpa àgwà dị Chineke mma, 17 okwu ndị a ga-agbasakwa ka ọnyá na-aba aba. Haịmeniọs na Faịlitọs so ná ndị na-agbasa ụdị okwu a.+ 18 Mmadụ abụọ a anaghịzi akụzi eziokwu. Ha na-asịkwa na a kpọlitechaala ndị mmadụ n’ọnwụ.+ Ha na-akpakwa okwukwe ụfọdụ ndị aka ọjọọ. 19 Ma, Chineke tọrọ ntọala siri ike, nke kwụkwa chịm. E nwekwara ihe e dere na ntọala a nke dị ka akara. Ihe ahụ bụ, “Jehova* ma ndị bụ́ ndị ya,”+ nakwa, “Ka onye ọ bụla nke na-akpọ aha Jehova*+ ghara ime ajọ omume.” 20 N’ime ụlọ buru ibu, a na-enwe arịa dị iche iche. Ọ bụghị naanị arịa ọlaedo na nke ọlaọcha, kamakwa nke osisi na nke ụrọ. A na-eji ụfọdụ eme ihe bara uru, ma jiri ndị ọzọ eme ihe na-abaghị uru. 21 N’ihi ya, ọ bụrụ na mmadụ ahapụ arịa ndị nke a na-eji eme ihe na-abaghị uru, onye ahụ ga-adị ka arịa e ji eme ihe bara uru, bụrụ onye e doro nsọ, baara onye nwe ya uru, bụrụkwa onye a kwadebere maka ime ihe ọ bụla dị mma. 22 N’ihi ya, gbaara ihe na-agụ ndị na-eto eto agụụ ọsọ. Gbasie mbọ ike na-eme ezi omume, nwee okwukwe, hụ ndị ọzọ n’anya, bụrụkwa onye udo. Ka gị na ndị tụkwasịrị Onyenwe anyị obi, ndị obi ha dịkwa ọcha, na-eme ihe ndị a. 23 Etinyela ọnụ n’arụmụka na-enweghị isi,+ ebe ị ma na ha na-akpata ịlụ ọgụ. 24 Ohu Onyenwe anyị ekwesịghị ịlụ ọgụ, kama o kwesịrị iji nwayọọ* na-emeso mmadụ niile ihe,+ bụrụkwa onye ruru eru ịkụzi ihe, onye na-ejidekwa onwe ya mgbe e mejọrọ ya.+ 25 O kwesịkwara iji nwayọọ na-akụziri ndị isi ike ihe.+ Ikekwe, Chineke ga-eme ka ha chegharịa,* ha amata eziokwu nke ọma,+ 26 ghọta na Ekwensu jidere ha ná ndụ ka ha na-eme uche ya,+ anya edoo ha, ha esi n’ọnyà Ekwensu pụta.
^ O nwere ike ịbụ, “n’ihe ndị mmadụ na-eme kwa ụbọchị.”
^ Na Grik, “okpu mmeri.”
^ Na Grik, “o si ná mkpụrụ Devid.”
^ Ma ọ bụ “gbanwee obi ha.”